Saadaasha Cryptocurrency: Sida Loola Soco Waxqabadka Suuqa Sameeyayaasha | vfxAlert official blog
Saadaasha Cryptocurrency: raac ficilada kuwa sameeya suuqa
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies' ayaa run ka noqotay adduunka casriga ah iyo ka ganacsiga sarrifka. Qodobkaan, aan tixgelinno ikhtiyaarka noocan oo kale ah, sida loo sameeyo ikhtiyaarrada loo yaqaan 'crypto options', oo ah falanqeyn ku saabsan ciyaartoy waaweyn oo suuq ah. Waan ogaan doonnaa cidda ay yihiin, sida loola socdo ficilada, iyo sidoo kale inaan isku dayno inaan ka faa'iideysano macluumaadkan.
Adduun ahaan, ma jiraan wax ka badan 20% shirkadaha Forex ee ka ganacsada waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies', laakiin sannadkan iyo sannadka dambe waxaa kordhay koror xoog leh:
Macaamiisha loo yaqaan 'Crypto brokers' ee taageera lacagaha dijitaalka ah;
Liiska cryptocurrencies ee qalabka la bixiyay;
Soo bixitaanka waxyaabo cusub oo ka soo jeeda cryptocurrency iyo CFDs oo ku jira indices crypto.
Bangiyada maalgashiga adduunka ugu waaweyn iyo nidaamyada lacag bixinta, sida JPMorgan iyo PayPal, waxay go'aansadeen inay si guud u taageeraan ka ganacsiga hantida hantida dhijitaalka ah ee ka soo muuqan doonta shirkadaha bixiya xisaabaadka isla markaana si toos ah ay ugu heli karaan macaamiisha sarriflayaasha lacagaha iyo ikhtiyaariyada loo yaqaan 'crypto options copy' tradin g.
Ganacsato badan, sababo kala duwan awgood, waxay u leeyihiin feker diidmo qalabkan. Farsamo ahaan way adag yihiin in la fahmo, koritaanku wuxuu la mid yahay buun buuninta, iyo isbeddelku wuxuu si weyn u adkeeyay adeegsiga ikhtiyaarrada loo yaqaan 'cryptocurrency' softwar e ee ganacsiga intraday. Looma baahna in laga hadlo falanqaynta aasaasiga ah gebi ahaanba - maanta ma jiraan tilmaamayaal dhaqaale oo gooni ah oo loogu talagalay Bitcoin iyo AltCoins. Tallaabooyinka dowladda, sida mamnuucista macdanta ee Shiinaha, saameyn xoog leh ayey ku leedahay suuqa, laakiin goorta ay dhici doonaan, cidina ma oga .
In kasta oo cilladaha kor ku xusan, waxaa jira hal muuqaal muhiim ah oo ku jira ku dhowaad dhammaan cryptocurrency. Waxay si weyn u fududeyneysaa falanqaynta, saadaalinta dhaqdhaqaaqa hantida dijitaalka ah iyo tayada xitaa ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee calaamadaha bilaashka ah - helitaanka iyo hufnaanta dhammaan ficilada iyo macaamillada ciyaartoy waaweyn iyo maalgashadayaal, taas oo loo arko inay tahay mid ku dhex jirta suuqyada dhaqameed.
Suuqgeeyayaasha, kuwa wax xajiya iyo kuwa haysta - waa laf-dhabarta nidaamka deegaanka ee suuqyada loo yaqaan 'cryptocurrency system'
Si ka duwan lacagta dhabta ah ama "fiat", sicirka ay kuxirantahay hadalada iyo ficillada wakiilada FED, ECB iyo maamulayaasha kale ee maaliyadeed ee aduunka, sicir bararka, cabirka arinta iyo xitaa qeybinta lacagta qadaadiicda ah ee gacanta ayaa horay loo ogyahay. qof kasta oo internetka isticmaala.
Koodhka wax kasta oo loo yaqaan 'cryptocurrency' waa furan yahay, waxaad had iyo jeer ogaan kartaa cabbirka sii-deynta ugu dambeysa, xawaaraha soo saarista baloogyo qadaadiic cusub iyo xog kale si loo raadiyo calaamadaha ganacsiga ee loo yaqaan 'cryptocurrency cryptocurrency' . Macluumaadkan oo ah qaab fudud oo la heli karo, oo ay weheliso tirakoobka qiimaha, waxaa laga heli karaa bogga CoinMarketCap adoo ka dooranaya lacagta dijitaalka ah ee la doonayo ama calaamadda liiska. Tusaale ahaan, fiiri Bitcoin:
Qalabka ugu dambeeya wuxuu caawiyaa in la go'aamiyo kaliya xawaaraha isku imaatinka xannibaadda laakiin sidoo kale wuxuu muujinayaa taariikhda macaamil ganacsi ee lacag kasta, cabbirka dhigaalka jeeb kasta iyo dhaqdhaqaaqa lacagta dijitaalka ah guud ahaan. Tani waxay noqon doontaa shaandhayn wanaagsan oo loogu talagalay calaamadaha ganacsiga 'crypto' . Mabda'a ugu weyn ee xannibaadda loo yaqaan 'cryptocurrency blockchain' waa xayeysiis dhammaystiran iyo daahfurnaan, taas oo u fureysa fursadda qof walba inuu xisaabiyo ficillada 'crypto-whales' iyo kuwa haysta.
Suuqgeeyayaasha ama Crypto whale - kuwa haysta cryptocurrencies oo leh qadaadiic badan oo qadaadiic ah boorsooyinkooda.
Holder - waa erey guud oo guud oo khuseeya dhammaan ganacsatada isticmaala istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah “iibso oo u hay” .
Si ka duwan Bitcoin, lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' waxay lahaan karaan "heysatayaal shaqeeya". Goobta martida loo yahay, waxay "xayiraan" lacagaha muddo cayiman oo ah dammaanad qaadasho (Stake). Tani waxay damaanad qaadeysaa “daacadnimo” marka la xaqiijinayo macaamil ganacsi iyada oo aan la helin qatar ah in lacag lumiyo haddii ay dhacdo isweydaarsiga fikradaha.
Marka, dadka wax ku dhufta waa nooc cayiman oo macdan qodayaal ah oo abaalmarin ku qaata isku soo uruurinta baloogyada wareejinta cryptocurrency iyadoo lagu beddelayo qayb ka mid ah kripto loo dhigay dammaanad ahaan .
Haddii ganacsatada suuqa Forex lagu qasbay inay falanqeeyaan buugga amarka ama ay sugaan warbixinnada COT ee jimcaha, ka dib inta badan lacagaha dijitaalka ah ma aha wax adag in lala socdo ficilada dadka haysta akoonnada waaweyn iyo dhaqdhaqaaqa raasumaalka. Halkan, xannibaadda waxay u adeegtaa sidii buugaagta furan ee dhammaan macaamilada ilaha waqtiga dhabta ah ee macluumaadka loogu talagalay calaamadaha ikhtiyaariga ah ee 'auto crypto' .
Sidee ayay kuwa sameeya suuqa iyo kuwa wax iibiya u saameeyaan suuqa cryptocurrency?
Heerka sarrifka ee hal kriptovalyutnoloji, sida saamiyada, waxay kuxirantahay tirada hantida sabeynta bilaashka ah ee wareegga bilaashka ah. Suuqgeeyayaasha, sida caadiga ah, waxay ku ururiyaan lacagta birta ah boorsada jeebka muddo-dheer, oo lagu caddeeyo taariikhda kororka sicirka sarrifka lacagaha dijitaalka ah, oo lagu qiyaasi karo dhaqdhaqaaqa guud ee qiimaha.
Marka loo eego tirakoobka laga heli karo websaydhka CoinMarketCap, waxaa la arki karaa in xaraashka suuqyadu uu ahaa $ 1.63 bilyan 8 sano ka hor. Hadda qiimaha dhammaan hantida waa 1000 jeer ka badan, waxaa ku ururay 45% Seeraar iyo 25% saddexda ugu horreeya ee waaweyn AltCoins. Had iyo jeer waxaan falanqeynaa ikhtiyaarrada calaamadaha ganacsiga ee loogu talagalay BTC marka hore .
Kobaca deg degga ah ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' wuxuu ciyaartoy waaweyn ka dhigay dad qanacsan oo haysta, istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ku saabsan iibsashada hantida iyo haysashadooda, ku abuuraya hoos u dhac lacag la'aan ah suuqa, taas oo ku riixeysa koorsada heerar cusub Iyo sabab la mid ah, xannibaadda dhijitaalka ah ayaa sii kordheysa, halkaasoo lagu bixiyo "heerka".
Doonista inaad lacag ka sameyso "qabowga" ee loo yaqaan 'cryptocurrency' waxay kordhisaa sicirka sababtoo ah iibsashada firfircoon ee suuqa. Sargaalku wuxuu badiyaa dhiiri galiyaa soo ifbaxayaasha cusub ee suuqa sameeya, maxaa yeelay waa cabirka saamiga dhigaalka sida ku cad algorithm-ka xannibaadda ee dammaanad qaadaya soo noqnoqodka sare ee helitaanka abaalmarinta.
Sidee loo falanqeeyaa jeebadaha xayiraadda 'cryptocurrency'?
Kordhinta isku dheelitirka jeebadaha sameeyayaasha suuqyada ayaa u adeegta sidii calaamad xaqiijineysa koritaanka hadda ee suuqyada loo yaqaan 'cryptocurrency cryptocurrency' laakiin ma siineyso ganacsatada faa'iido qaab ah tilmaame hoggaamineed.
Aad ayey uga muhiimsan tahay, markaad isticmaaleyso ganacsiga ikhtiyaariga ah ee loo yaqaan 'crypto options', si loola socdo habdhaqanka dadka waaweyn ee haysta xilligii hoos u dhaca suuqa cryptocurrency. Haddii hoos u dhaca sarrifku uu horseedo hoos u dhigis dhigaal badan, isku day inaad wax ka iibiso suuqa ama aad yareyso dhicitaanka - iibka degdegga ah ee degdegga ahi wuxuu horseedi karaa burburka suuqa.
Korodhka firfircoon ee deebaajiga cinwaanada "sameeyaha" ee boorsooyinka waqtiga hoos u dhaca suuqa ayaa tilmaamaya u dhawaanshaha hoose. Dabcan, waa inaadan ku xisaabtamin dib-u-noqosho deg deg ah marka ay u muuqato kala duwanaanta lagu tilmaamay. Ganacsaduhu waa inuu jebiyaa gelitaankiisa qaybaha oo uu diyaar u ahaadaa inuu ku daro ama xiro xulashooyinka.
Boorsooyin waaweyn ayaa laga heli karaa isku-darka tirakoobka ee ikhtiyaarrada kumbuyuutarrada ikhtiyaariga ah ee loo yaqaan 'cryptocurrency options' iyo baareyaasha xannibaadda. Kuwani waa adeegyo khaas ah oo aan ku koobnayn oo keliya taariikhda dhammaan macaamillada laakiin sidoo kale tiro dheeraad ah oo cilmi baaris ah. Tusaale ahaan, websaydhka BitInfoCharts, cinwaanno waawayn ayaa ku jira qaybta "Explorer".
Aynu dooranno sahamiyaha Bitcoin tusaale ahaan falanqaynta xulashooyinka calaamadaha ganacsiga . Sida aad ka arki karto sawirka hoose, adeeggu wuxuu horeyba ugu kala jebiyey gorfaynta liisas si uu ula socdo ficilada kuwa sameeya suuqa. Dhammaan boorsooyinka waaweyn waxay ku yaalliin cinwaanada ugu taajirsan (1). Kormeeraha ayaa bixinaya 15ka cinwaan ee ugu sareeya maalintii la soo dhaafay Qiimeynta ugu sareysa-100 waxaa lagu arki karaa adigoo gujinaya magaca liiska.
Hoos waxaa ku yaal xulashada 100-ka cinwaan ee ugu sarreeya (2), oo lagu xushay xaddiga wareejinta 24 saacadood. Waa tirakoobyadan loo adeegsaday si dhakhso leh loola socdo ficilada crypto-nhales. Safka "Gelinta" wuxuu muujinayaa inta macaamil (24 saacadood gudahood) ay ku heleen boorsada jeebka. Safka " Wax soo saarka " ayaa muujinaya tirada wareejinta ee boorsada jeebka. Macluumaadkani wuxuu muhiim u yahay go'aaminta ikhtiyaarrada calaamadaha bilaashka ah ee 'crypto' .
Iyadoo la raacayo, qaddarka soo galku waa wadarta dhammaan deebaajiga, iyo qadarka wax soo saarku waa kharashyada deebaajiga ee aan xiiseyneyno. Aynu si dhow u eegno miiska hadda jira.
Isla markiiba ka saar miisaanka eber-ka ee la helay isla markaana lagu qaatay hal maalin. Cryptocurrency ayaa timid oo markiiba tagtay, taas oo macno samaynaysa .
Ha fiiro gaar ah u lahayn boorsooyinka leh tiro badan oo dhigaal iyo kharash maalin kasta ah, ganacsade waa inuu daneeyaa boorsooyinka leh deebaaji ballaaran oo helay macaamil ganacsi oo aan meelna ku bixin maalin, ama taa beddelkeed - laga dhigay mid weyn bixitaanka iyadoon lacag laga helin bannaanka. Xisaabaadka noocan oo kale ah waxaa si fudud ku garan kara duullimaadyada maran ee safka "Wax-soo- saarka " ama " Wax-soo-saarka ":
Sawirka kore wuxuu muujinayaa in seddex cinwaan laga helay nidaamkan 24 saac gudahood. Laba cinwaan ayaa kala baxay jeebadaha lacag aad u badan oo 900 BTC iyo 887.91 BTC, hal cinwaan ayaa laga soo saaray 700 BTC. Sida iska cad, maalinta iibka falanqaynta ayaa ka xoog badan iibsiyada BTC.
Xannibaadda ayaa kuu oggolaaneysa inaad ogaato waqtiga macaamilka adigoo gujinaya xiriirka cinwaanka jeebka 'crypto-kit'. Debaajiga aan daawannay ayaa dib loo buuxiyey 30-kii Janaayo, 2021. Milkiilaha wuxuu go'aansaday inuu ka takhaluso dhammaan lacagta 25-ka Maajo saacadaha 00 41 daqiiqo.
Aynu isbarbar dhigno tan ku saabsan jaantuska BTC. Iibku wuxuu ku soo beegmay isku daygii Bitcoin ee ahaa inuu cusbooneysiiyo ugu badnaantii shalay. Waxaa habboon in la dhagaysto sameeyaha suuqa, joojinta ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee 'crypto' nuqul ganacsiga iyo hagaajinta boosaska qaarkood. Jaantusku wuxuu muujinayaa inuu iibsaday BTC sanadkaan hoose, wuxuu qabtay booskaas inkasta oo 40% hoos u dhacday, haddana wuxuu ku xiray dib u soo celin. Faa’iidada heshiiska $ 2,810,466.
Sida aad ka arki karto tusaalaha falanqaynta, macaamil waawayn waa in si dhakhso leh loola macaamilaa; adeegga whale-alert wuxuu ka caawin doonaa ganacsadaha tan, daabacaadda macaamil ganacsi daraasiin nooc oo cryptocurrencies ah akoonkiisa Twitter. Shirkaddu waxay bixisaa macluumaadka qulqulka ee ku saabsan wareejinta laga bilaabo $ 20 kun, iyaga oo siinaya calaamadda ahmiyadda iyo xallinta haddii la ogyahay qofka qaata / diraha jeebka.
Shaandhada milkiilayaasha jeebka ayaa muhiim u ah in laga saaro falanqaynta is-weydaarsiga Cryptocurrency ee haysa dhammaan macaamiisha dhiggooda isla cinwaanada. Markii hore, cabirku wuxuu la xiriiray koritaanka iyo hoos u dhaca heerka cryptocurrency, laakiin 2020 wuxuu sameeyay isbedello aan la saadaalin karin.
Maaddaama qiimaha sarrifka Bitcoin iyo suuqa guud ahaan koray, isu-dheellitirka boorsooyinka dhammaan is-weydaarsiyada waaweyn ayaa si aad ah hoos ugu dhacay iyo PUT calaamadaha ganacsiga ee loo yaqaan 'crypto PUT' ayaa isu rogay inay noqdaan kuwa ugu faa'iidada badan. Kiis la mid ah kala duwanaanshaha ayaa la duubay 2016, taas oo u suurta gelineysa falanqeeyayaasha qaar inay sheegtaan calaamadaha mowjadda koritaanka weyn, laakiin xaqiiqda ayaa weli ah in boorsooyinka sarrifka cryptocurrency aysan ku habbooneyn doorka kuwa sameeya suuqa.
Falanqaynta wadarta tirada xisaabaadka nibiriga ayaa ah qaab kale oo lagu saadaalin karo salka iyo hoos u dhaca hoos u dhaca suuqa. Marka lagu daro tirakoobka barnaamijyada 'crypto options' , waxaan kugula talineynaa websaydhka Glassnode. Xullo ikhtiyaarka "Jaantusyada ", nooca loo yaqaan 'cryptocurrency' oo ballaadhi menu 'Cinwaanada':
Adeeggu wuxuu bixiyaa 38 nooc oo ah falanqaynta xannibaadda ee loogu talagalay ganacsiga loo yaqaan 'crypto trading' , laakiin macluumaadka ugu badan ayaa ah tirada cinwaanada leh dheelitir ka sarreeya 10,000 BTC. U fiirso sida taariikhda ciyaartoydii waaweyni si dhakhso leh uga soo baxeen kadib muddo dheer oo muddo dheer ah oo suuqa ay sannado badan cusbooneysiinayeen.
Shaxda ku dhufashada shaxda ayaa ah iibka argagaxa ee xirmooyinka 'crypto crypto kit' waqtiga argagaxa 2019 iyo mugga weyn ee wax iibsashada xilligii shilkii Maarso ee dhacay intii lagu jiray xiisadda coronavirus 2020.
Dhibaatadu waxay tahay in adeeggu uusan muujin tirakoob bilaash ah sanadkii la soo dhaafay, laakiin waxay layaabi laheyd falanqeeyaha. Markii ugu horreysay taariikhda suuqa loo yaqaan 'cryptocurrency', milkiilayaasha akoonnada waaweyn ee BTC waxay isticmaaleen koror aan horay loo arag oo suuqa ah oo ku saabsan iibka firfircoon ee hantida.
Soo koobo analysis Falanqaynta farsamada ayaa sii wadda inay macaash ka helaan hanti kasta oo maaliyadeed, xitaa lacagta dhijitaalka ah iyo ikhtiyaarrada bilaashka ah ee 'crypto' . Markaad fiiriso tilmaamayaasha, ganacsaduhu waa inuu had iyo jeer xasuusnaadaa in sicirku had iyo jeer yahay kan ugu horreeya ee dhaqaajiya isbeddelka mugga suuqa iyo isu dheellitirka xoogagga iibsiga / iibinta ee u dhexeeya kuwa sameeya suuqa. Daawashada iyaga, waxaad noqon kartaa kan ugu horreeya ee arka isbeddellada: isbeddel cusub, dib u noqosho, dib u soo celin ama sixitaan. Noqo mid feejignaan leh mar walbana ka sii horreeya kuwa kale .